BREAKING NEWS: ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲ အုပ်စု မဲခွဲမှု ထွက်ပေါ် လာခဲ့ပြီး ပေါ်တူဂီ ၊ ပြင်သစ် နဲ့ ဂျာမဏီ တို့ တစ်အုပ်စုတည်း ကျခဲ့ . . . . . - SPORTS MYANMAR
BREAKING NEWS: ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲ အုပ်စု မဲခွဲမှု ထွက်ပေါ် လာခဲ့ပြီး ပေါ်တူဂီ ၊ ပြင်သစ် နဲ့ ဂျာမဏီ တို့ တစ်အုပ်စုတည်း ကျခဲ့ . . . . .
ဥရောပ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် UEFA က နေ ကြီးမှူး ကျင်းပမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဥရောပ ချန်ပီယံ ရှစ် ဖလား ( ယူရို ) ပြိုင်ပွဲကြီး အတွက် မဲခွဲမှု ကို ယမန်နေ့ က ပြုလုပ် သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ခြေစစ် ပွဲ အောင်မြင် ပြီး အသင်း ၂၀ နဲ့ Play off နေရာ ၄ နေရာ တို့ ဟာ မဲအိုး ၄ အိုး ထဲ မှာ ပါ၀င် ခဲ့ကြပြီး မဲခွဲ အဆုံး အဖြတ် ခံယူ ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ မဲခွဲ မှု အပြီး မှာတော့ အလွန် စိတ်ဝင်စား ဖို့ ကောင်းပြီး အကျိတ် အနယ် ရှိမယ့် အုပ်စု တွေ ပေါ်ထွက် လာခဲ့ ပါတော့ တယ် ။
အုပ်စု အေ ကတော့ တူရကီ ၊ အီတလီ ၊ ဝေးလ် နဲ့ ဆွစ်ဇာလန် တို့ ပါ၀င် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ အီတလီ ဟာ ခြေစစ်ပွဲ မှာ ပွဲ အားလုံး ကို အနိုင် ကစား ပြီး အောင်မြင် ခဲ့တဲ့ အသင်း ဖြစ်သလို ယူရို ၂၀၂၀ မှာ လည်း ဗိုလ်စွဲ နိုင်တယ် လို့ ထင်ကြေး ပေးခံ ထားရတဲ့ အသင်း ဖြစ် ပါတယ် ။ ကျန်တဲ့ ၃ သင်း ကတော့ ခြေစွမ်းချင်း သိပ်မကွာတာ ကြောင့် ဘယ်အသင်း နောက်တစ်ဆင့် တက်နိုင် မလဲ ဆိုတာ အကျိတ် အနယ် ယှဉ်ပြိုင် ကြရမှာပါ ။
အုပ်စု ဘီ မှာတော့ ဘယ်လ်ဂျီယံ ၊ ဒိန်းမတ် ၊ ဖင်လန် နဲ့ ရုရှ တို့ ပါ၀င် လာကြပြီး ဘယ်ဂျီယံ ဟာ အုပ်စု ဗိုလ် ဖြစ်ဖို့ သေချာ သလောက် ရှိ နေပါတယ် ။ ကျန် ၃ သင်း ကတော့ အုပ်စု ဒုတိယ နေရာ ၊ အကောင်းဆုံး အုပ်စု တတိယ နေရာ တွေ ကို ရယူ နိုင်ဖို့ အတွက် အားကုန် ယှဉ်ပြိုင် ကြရ မှာပါ ။
အုပ်စု C မှာတော့ UEFA Nations League ဒုတိယ ဆု ရှင် နယ်သာလန် ၊ ယူကရိန်း ၊ သြစတြီးယား နဲ့ Play-off D Winner အသင်း တို့ ပါ၀င် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ Play-off D မှာ ဂျော်ဂျီယာ ၊ မြောက် မက်ဆီဒိုးနီးယား ၊ ကိုဆိုဗို နဲ့ ဘီလာရုစ် တို့ ပါ၀င် ပြီး ၂၀၂၀ မတ်လ ထဲ မှာ အဆုံးအဖြတ် ကစားကာ အနိုင်ရတဲ့ တစ်သင်း က ဒီအုပ်စု ထဲ ကို ပါ၀င် လာမှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
အုပ်စု D မှာတော့ အင်္ဂလန် ၊ ခရိုအေးရှား ၊ ချက် ရီပတ်ဘလစ် နဲ့ Play-off C Winner တို့ ပါ၀င် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ ဖလား ပြီး ကတည်းက ရေစက်ဆုံ နေတဲ့ အင်္ဂလန် နဲ့ ခရိုအေးရှား တို့ ဒီ တစ်ကြိမ် မှာလည်း ပြန်လည် ဆုံတွေ့ ခဲ့ကြ ပြန် ပါတယ် ။ Play-off C မှာတော့ စကော့တလန် ၊ နော်ဝေ ၊ ဆားဘီးယား နဲ့ အစ္စရေး တို့ပါ၀င် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
အုပ်စု E မှာတော့ ယူရို ၂၀၀၈ နဲ့ ၂၀၁၂ ပြိုင်ပွဲ တွေ ရဲ့ ချန်ပီယံ စပိန် အသင်း ၊ ဆွီဒင် ၊ ပိုလန် နဲ့ Play-off B Winner အသင်း တို့ ပါ၀င် လာခဲ့ ကြ ပါတယ် ။ Play-off B မှာတော့ ဘော့စနီးယား ၊ အိုင်ယာလန် ၊ စလိုဗက်ကီးယား နဲ့ မြောက်အိုင်ယာလန် တို့ပါ၀င် ကြ ပါတယ် ။ ဒီ အသင်းတွေ ဟာ ၂၀၂၀ မတ်လ ထဲ မှာ တစ်ကျော့ကန် ရှုံးထွက် ပွဲစဉ်တွေ ကို ဆီမီး ဖိုင်နယ် အဆင့် ကနေ စတင် ယှဉ်ပြိုင်ပြီး အနိုင် ရတဲ့ တစ်သင်း ဟာ အုပ်စု E ကို ရောက်ရှိ လာမှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
အုပ်စု F ကတော့ ယူရို ၂၀၂၀ ရဲ့ မရဏ အုပ်စု ( Group of Death ) ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ လက်ရှိ ချန်ပီယံ ပေါ်တူဂီ ၊ ယူရို ၂၀၁၆ ဖိုင်နယ် မှာ ပေါ်တူဂီ ကို ရှုံးပြီး ဒုတိယ ဆု နဲ့ ကျေနပ် ခဲ့ရတဲ့ ပြင်သစ် ၊ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ ဖလား ချန်ပီယံ ဂျာမဏီ တို့ တွေ အတူ ကျရောက် ခဲ့ကြပြီး ကျန် တစ်သင်း ကတော့ အိုက်စ်လန် ၊ ဘူဂေးရီးယား ၊ ဟန်ဂေရီ နဲ့ ရိုမေးနီးယား တို့ ပွဲစဉ် ကနေ ပေါ်ထွက် လာမယ့် Play-off A Winner ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ယူရို ၂၀၂၀ ရဲ့ ပွဲစဉ် တွေ ကို နိုင်ငံ ပေါင်း ၁၂ နိုင်ငံ က ကစားကွင်း ၁၂ ကွင်း မှာ လှည့်လည် ကစား သွားကြ မှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ ကနေ စတင် မှာဖြစ်ပြီး အုပ်စု ပ-ဒု ရ ၁၂ သင်း နဲ့ အကောင်းဆုံး အုပ်စု တတိယ ၄ သင်း တို့ ဟာ ရှုံးထွက် အဆင့် ကို တက်ရောက် ကြမှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ကဲ . . . . ဒီ တစ်ခါ ပြိုင်ပွဲ မှာ ဘယ်သူ ဗိုလ်စွဲ မလဲဗျာ ?